Maxaad kala socotaa qorshaha uu Ra’iisul wasaarihii hore Cumar Cabdirashiid u joogo magaalada Kismaayo? | Arlaadi
Home Blog Maxaad kala socotaa qorshaha uu Ra'iisul wasaarihii hore Cumar Cabdirashiid u joogo magaalada Kismaayo?
Maxaad kala socotaa qorshaha uu Ra’iisul wasaarihii hore Cumar Cabdirashiid u joogo magaalada Kismaayo?
Jimco January 19, 2018| Arlaadi Online
Cumar C/rashiid oo magaalada Kismaayo ka wada qorshe ka dhan ah Dowladda Federaalka
Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke Ra’iisal Wasaarihii hore dowladda Soomaaliya ayaa ku sugan magaalada Kismaayo, isaga oo kulamo kala duwan la yeeshay Madaxda Maamul goboleedka Jubaland.
Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in Cumar C/rashiid oo magaalada Kismaayo soo gaaray maalintii Arbacada uu ku guuleystay in madaxweynaha Jubaland Axmed Madoobe uu ka baajiyo ka qeyb galka heshiiska Galmudug iyo Ahlu Sunna ee ka dhacay magaalada Dhusamareb.
Arrimaha ay ka wadahadleen Cumar C/rashiid iyo Axmed Madoobe ayaa la sheegay inay ka mid yihiin: isbaheysi ka dhan ah Dowladda Federaalka oo ay labada dhinac isku afgarteen, isla markaana dowladda Imaaraadka ay dhaqaale ku siineyso maamulka Jubaland.
Waxaa kale oo ka mid ah in maamulka Jubaland uu taageero buuxda siiyo dowladda Imaaraadka Carabta. Wararka kale ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in Madaxweyne K/Xigeenka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan laga hor istaagay inuu ka dhoofo garoonka diyaaradaha Kismaayo si uu uga qeyb galo heshiiska Galmudug iyo Ahlu Sunna.
Dhinaca kale Cumar C/rashiid oo markiisii hore ka yimid magaalada Dubai ee wadanka Imaaraadka Carabta ayaa la filayaa inuu u kictimo magaalada Garowe si uu maamulka Puntland ugala hadlo qorshihiisa ku aadan majaxaabinta Dowladda Federaalka Soomaaliya.